Iningi labanikazi bazo yokusongela yangasese ngonyaka waphawula njengoba, uqwembe emhlophe phezu currant emhlophe. Ngaphezu kwalokho, kungabonwa hhayi kuphela e white kodwa futhi currants ezimnyama. Kufanele kuqashelwe ukuthi kuthinta amaqabunga isihlahla. Uyini umthombo ukutheleleka lokhu berry okumnandi ngokumangalisayo? Kuyinto ukhunta ngesikhathi sasebusika ku amahlumela onegciwane kanye ezilimele izithelo esiwile. Ehlobo lika nezimagqabhagqabha mhlophe currants ezimhlophe ekhiqizwa futhi ngenxa ezinhlamvu fungal, okuyinto zayo ezigcinwe kwezinye "ichithekile" plant izitho. Ezihlabayo kancane kancane "itheleleke" amasosha omzimba abo yesithwathwa kuyehla, kanti eminyakeni emibili currants uyafa ngokuphelele.
Lokho okwenzayo izimpawu ngenhla?
Uma ubona nezimagqabhagqabha mhlophe on the currants ezimhlophe, okungukuthi amaqabunga ehlathini ohlangothini engezansi, - obaziyo, lokhu kuvela izimpawu zokuqala zokugula. Ngokuhamba kwesikhathi, Bokuhlela umbala omhlophe liyavela umoba, izithelo kanye amahlumela amasha. Kamuva i-plaque ohlangene, umbala waso kuyoba kancane brown, futhi ekugcineni siguqulelwa wazizwa nge amachashazi amnyama. Lona umzimba fruiting we ukhunta.
Athinteka ngakho layering amajikijolo ibe luhlaza lemicu empunga elinamathela othini, azidle, kusuka kube nzima. Uma lezi zimpawu zenzeka, lokho kusho into eyodwa - isikhathi nokwelapha okusebenzayo ehlathini aphuthelwe. Gardener isezingeni ukuqala ekwindla noma kwentwasahlobo ukuze abhubhise bonke abantu ngothi lwabo, amaqabunga alimele amahlumela.
Nokho, kumele kugcizelelwe ukuthi enamathela emhlophe phezu ezimhlophe currant kwakhiwa hhayi ngaphezulu kuka amamaki of black noma obomvu. Ngokuvamile, isifo "iqhubeka" kule sizini ehlobo. Ngokuvamile-ke abangenwe ugqumugqumu onesifo. izimo ezikahle sokuthuthukiswa lesi sifo yilabo zinomswakama omningi nomhlabathi, kanye sezulu efudumele. Izifo ongabhubhisa kuphela lapho besanda kuqala ukutheleleka.
enamathela Okumhlophe amaqabunga currants aqedwa sishaye nabo amakhemikhali ezikhethekile. Yiphathe ehlathini kufanele kube izikhathi ezimbalwa, futhi lokhu kufanele kwenziwe ngokuqinile ulandele iziyalezo ezikuyo.
Ukuze balwe ubusika ukutheleleka, ebisetshenziswa sulfate yethusi, okuyinto sezulu esinamafu noma kusihlwa ukuze fafaza simila. Ngakho kubalulekile ukuba control ukuze ingxenye yekhasi ngalinye Welashwa nge ukwakheka kwamakhemikhali. Kushisa, it is hhayi Kunconywa ukuba bafeze sishaye elangeni.
Uma currants embozwe yokuqhuma mhlophe, khona-ke ungakwazi ukuqeda le nkinga futhi ngaphandle "yokuthakwa kwamakhemikhali".
Ngokwesibonelo, kudingeka alungiselele kokwakhiwa okulandelayo. Kuyadingeka ukuthatha mullein noma hay ukubola ku isamba 1/3 ye-amabhakede ejwayelekile futhi wathi dunk isithako ngamalitha amathathu amanzi bese sokunika izinsuku ezintathu. Ngemva kwalokho, izinto okuholela siphela futhi emanzini endaweni isilinganiso 1: 3 futhi abakhwabanisi. Ngokusho "isidakamizwa" kufanele aphathwe isitshalo izikhathi 3, okungukuthi ngaphambi zom isikhathi emva zom nongqi phambi defoliation.
Libuye ngempumelelo yokulwa yokuqhuma emhlophe phezu ehlathini currant izinkuni umlotha - ke kumele ibekwe ifomu elomile iziqu esihlahleni sezihlahla zone.
Ukunciphisa ingozi yesifo currant ngenhla, ukuthenga izinhlobo ukuthi abe amasosha omzimba enkulu kuwo.
Indlela yokukhulisa u-anyanisi ephunga yembewu?
Uranus - unkulunkulu wesibhakabhaka saseGrisi lasendulo
Uyini bitterling nendlela kuyingozi?